Iphupha malunga noWal Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Umnenga yenye yezona ndawo zinomtsalane nezonwabisayo kubemi beelwandle. Esi silwanyana sinokufikelela kubukhulu obukhulu ngokuxhomekeke kuhlobo lomnenga. Akumangalisi ukuba abantu kudala besoyikisela i-sperm whale enkulu okanye i-killer whale. Amabali amadala oomatiloshe bahlala bethetha ngokudibana kwezi zilwanyana kunye nomnenga awudlali kuphela indima ebalulekileyo kwinoveli iMoby Dick.
Izinto eziphilayo kwilizwe lamanzi nazo zibonakala rhoqo el mundo yamaphupha. Umnenga ngokukodwa liphupha ozibona rhoqo.
1 Uphawu lwephupha «umnenga» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umnenga» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umnenga» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umnenga» - ukutolikwa ngokubanzi
Kuphando lwamaphupha, amanzi kwaye ke ngokunjalo nezilwanyana ezihlala kule nto zibaluleke kakhulu. Umnenga ngokwawo unokuba nemisebenzi emininzi njengezilwanyana eziphupha. Njengoko kuhlala kunjalo, ukutolikwa ngokuchanekileyo kwamaphupha kuxhomekeke kwiinkcukacha ezifuna ukuhlalutywa:
Ukuba umntu ophuphayo ubona kwaye aqwalasele umnenga, ke le meko yephupha ihlala ithetha Yintlungu y ukungenisa kumcimbi othile. Nangona kunjalo, le mvakalelo ingonwabisiyo ayizukuqinisekiswa. Kodwa umnenga ophuphayo unokuba sisibhengezo seshishini elinenzuzo enkulu mpu melelo kuba. Ke umzekeliso "ukudubula okukhulu" kusondela ephupheni, awothi ekugqibeleni alifumane.
Ukuba iphupha linobunzima kwihlabathi elivukayo, umnenga ubhengeza ukuba uyasondela kwihlabathi lamaphupha. Uncedo ngomhlobo olungileyo. Le nkxaso iya kusombulula iingxaki ebomini bokuvuka.
Ukuba isilwanyana esanyisayo saselwandle sidada siye kwinqanawa ephupheni, ke lo mfanekiso uphupha ufuzisela ukuba iphupha Umsebenzi wasekhaya ndikhathazekile kwaye ndikrazukile ngapha nangapha. Ikwasongela ngokulahleka kwepropathi yakho. Ukuba umnenga uhlasela inqanawa ephupheni kwaye uqiniseke ukuba iyabhabha, ubomi bokuvuka bephupha bujika bube yinto enkulu. ingxaki.
Ukuba umnenga wokubhukuda obuthathaka ubonakala kwilizwe lamaphupha, oku kubonisa ngophando lwamaphupha ukuba kulula ukuba umphuphi ebomini athathe isigqibo phakathi kwemisebenzi yakhe kunye notyekelo. Ukuba ulele ephupheni ngeharhu ekuzingeleni komnenga, kungekudala unokulindela inzuzo yemali.
Uphawu lwephupha «umnenga» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha ubona umnenga njenge isilumkiso ngaphambi kwe-subconscious. Ukuba umntu ophuphayo ubona umnenga ngelixa elele okanye aginyiwe yiyo, iingozi zisongela kwi-subconscious yakhe. Lo mfanekiso wephupha kukucela umntu ophuphayo ukuba akhuphe izinto kwi-subconscious ekukhanyeni kwemini. Kuphela kuxa unokuphepha iingozi kunye neziphumo zazo.
Uphando lwamaphupha lukwatolika umnenga njengomfanekiso wephupha njengesilumkiso. ukuzithemba okugqithisileyo.
Uphawu lwephupha «umnenga» - ukutolika kokomoya
Amanzi kunye nomnenga ohlala apho ubandakanyiwe kutoliko lokomoya. Amandla obomi iqhagamshelwe.